Potenza: ကျွန်ုပ်တို့၏ Linux အတွက်အသစ်သောလှပပြီးပြည့်စုံသောအိုင်ကွန်များ | Linux မှ
ဤနောက်ဆုံးလများ၌ကျွန်ုပ်၏ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုများစွာမပြောင်းလဲပါ အိုင်ကွန် set သို့မဟုတ် pack ကို.
ယခုငါသင်တို့အကြောင်းပြောချင်တယ် Potenzaအလွန်တရာပြည့်စုံတဲ့အိုင်ကွန်တွေ၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်မြင်ကွင်းများအတွက်အိုင်ကွန်များရှိသည်။ အတော်လေးအသစ်နှင့်ကောင်းသည်။ ပုံများကစကားလုံးများထက်ပိုပြီးပြောသည် -
ဤတွင် KDE application menu အချို့ကိုတွေ့ရသည်။
ဒါ Mint application menu ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
စာရေးသူ (Alessandrobo၌သင်တို့၏အလှူငွေ၌တည်၏ KDE- ကြည့်ပါ icon pack ကိုမှုတ်သွင်းထားကြောင်း ၀ န်ခံသည် Faenza ဟုတ်ပါသည်၊ သို့သော်အသွင်အပြင်သည်ပိုမိုရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းမှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ download link များဒီမှာရှိသည်။
Potenza ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် (.deb) Potenza (.tar.gz) ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
မှောင်မိုက်သောအကြောင်းအရာများအတွက် Potenza ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ (.deb)
မှောင်မိုက်သောအကြောင်းအရာများအတွက် Potenza မူကွဲကိုကူးယူပါ (.tar.gz)
ကောင်းပြီ add ထပ်ပေါင်းထည့်စရာများစွာမရှိပါ
အချို့သူများအတွက်ဤအိုင်ကွန်အစုများသည်အလွန်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိနိုင်သည် (သို့သော်အဲလပ်ကဲ့သို့) သို့သော်အခြားသူများ (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့) သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလတ်ဆတ်သောလေကိုပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Potenza: ကျွန်ုပ်တို့၏ Linux အတွက်အသစ်သောလှပပြီးပြည့်စုံသောအိုင်ကွန်အစုံ
ငါ့အရသာအတွက်အရမ်းပတ်ပတ်လည် .. နှင့် Faenza ..
Faenza ကိုမင်းမကြိုက်ဘူးလား သင်အကြိုက်ဆုံးအိုင်ကွန်အစုံကဘာလဲ။
Faenza ငါ့ကိုငြီးငွေ့ပြီးပြီ။ ငါ squarer icon တွေကိုကြိုက်တယ်၊ ဥပမာ Elementary ကိုပိုကြိုက်တယ်။
ပြီးတော့ Lubuntu Box ကိုမင်းဘယ်လိုမြင်သလဲ။
လွန်းကွေးလွန်း ... လိင်တူချစ်သူ? အစွန်းလည်းမရှိ၊ ထောင့်၊
ဟက်တာဟေး ... မမှတ်ချက် ... ဟက်တာဟက်တာဟက်တာ
123MB လေးလံသည် ငါ Mageia မှာစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဘိမေလ မာတဲလ် ဟုသူကပြောသည်
abimael martell အားပြန်ကြားပါ
အကယ်၍ ၎င်းတွင် Blender နှင့် DraftSight အိုင်ကွန်များပါ ၀ င်ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်ယူပါမည်။
သူတို့ကမဆိုးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုငါ KFaenza နဲ့နေနေတာ။
ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ KDE တွင်ရှိသည့်ပြီးပြည့်စုံသော icon themes များမပြည့်စုံမှုနှင့်အတူအရာအားလုံးကိုကြိုဆိုပါသည်
အခုငါ့မှာပfaိပက္ခဖြစ်နေတယ်။ Kfaenza ဒါမှမဟုတ် Potenza?
သူတို့ကငါ့ကို NitruxOS ကိုသတိပေးတယ်။ ပြီးတော့သူမုန်းတီးတဲ့အရာကတော့စတုရန်း၊ အဝါရောင် NitruxOS ဖိုလ်ဒါများဖြစ်သည်။ အရမ်းလှတယ်
nitrux က Buttons version ကိုယူလာပြီး folders နဲ့ icon တွေက rounded tips တွေရှိတယ်။ သူတို့က yellow yellow folders xD ကိုလိုက်ရင်
ဟဲ။ မှန်ပါတယ် ငါ Kfaenza လိုချင်ပေမယ့်မူရင်း XD ဖိုလ်ဒါ icon များနှင့်။
ဒီလိုက်တယ် ငါ Lubuntu ကနေနောက်ဆုံးပေါ်ကြိုက်တယ်
ပိုကောင်းတဲ့ nitro သို့မဟုတ် h20
ငါအနည်းဆုံးတော့အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက်သူတို့ကိုကြိုက်တယ်၊ သူတို့မွေးဖွားလာတဲ့ငါကဲ့သို့ပင်ငါ faenza
ငါကြိုက်တယ်၊ အခုငါအလားတူ MAC ပုံသင်္ကေတများသို့မဟုတ်ဤအရာများအကြားဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည်။ 🙂
အရမ်းကောင်း, ဒေါင်းလုပ်လုပ်။ သူတို့သည်ငါ၏ KDE အပေါ်ကြီးစွာသောကြည့်ရှုမည်
သူတို့ Nitrux KDE ကိုပိုကြိုက်ပေမယ့်သူတို့ကကောင်းပါတယ်
သူတို့ကကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမမြင်ရတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာကနေ .. သူတို့ကိုအသေးစိတ်ပိုပြီးအသေးစိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အရောင်တွေအားလုံးမှာပျော့ပျောင်းစေမှာမဟုတ်ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်, Kfaenza hahahahaha trololololol ...
အခုငါ K-HI-Lights ကိုသုံးနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကြိုးစားကြည့်မယ်၊ သင်တင်လိုက်တဲ့ပုံတွေကအရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်။
KDE အတွက် KFaenza ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ application အားလုံးအတွက် icon တွေရှိတယ်။
Red Hat ၏ဗားရှင်းဟောင်းကဲ့သို့သော pixelated နှင့် straight icon များ၏ဆောင်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင်ရှာနိုင်သည်ကိုမည်သူမဆိုသိပါသလော။ ၈ မီလီမီတာအလှအလှတရား။ ဤမျှလောက်ထွန်းလင်းသို့မဟုတ်ပင်ပန်းစေသောရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိဘဲအဖိုးတန်နှင့်။
ငါ kde အတွက် kneda နဲ့ Ronak desktop themes တွေကြိုက်တယ်၊ သူတို့ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဘယ် desktop က canaima က4kde gnome unity xfce သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုယူလာပေးမလဲ။ canaima3icon theme သည်အလွန်ကောင်းသော်လည်း canaima3wallpapers သည်အလွန်ကောင်းသော်လည်း icon theme သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်